ဘုန်းတော်ထင်ရှားသော အိမ်ထောင်ဖြစ်ရန် | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 25/07/2013
Posted in: ဆောင်းပါး.	Tagged: အိမ်ထောင်.	2 Comments
ခရစ်ယာန် အိမ်ထောင်များ အပေါ်မူ တည်၍ အသင်းတော် ကြီးထွားခိုင်ခံ့မှုကို ခန့်မှန်း သိရှိနိုင် ပါသည်။ ခရစ်ယာန် အိမ်ထောင် များသည် အသင်းတော်များနှင့် တိုင်းပြည်များ၏ ကျောရိုးပင် ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်များသည် လူမျိုး တို့၏ ယဉ်ကျေးမှုအစလည်းဖြစ်ပါသည်။
ခရစ်ယာန် အိမ်ထောင်ဆိုသည်မှာ မိဘများနှင့် သားသမီးများကို ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် ပေါင်း စည်းထားသော နေရာ တစ်ခုဟုလည်း ပြောနိုင်ပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် အိမ်ထောင်၏ ဦးခေါင်းဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် ဦးထိပ်ထား တိုင်တည်ကာ ပထမဦးစားပေး နေရာတွင် ထားရမည့်သူ ဖြစ်ပါသည်။ ဆုတောင်းရာ နေရာတစ်ခု လည်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်သည် ညီညွတ်လျက် လွတ်လပ်မှု အပြည့်အ၀ဖြင့် လှုပ်ရှား လုပ်ကိုင်ရာ နေရာ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပြီး သခင်ယေရှုအား ယုံကြည်ခြင်း အရှိန်အ၀ါ ထွန်းတောက်သော ၀န်းကျင်၏ အလင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းင်းအပြင် ဧည့်သည်ဝတ် ကျေသော နေရာ၊ ဘုရားကို ချစ်ကြောက် ရိုသေသော နေရာဟူ၍လည်း ပတ်ဝန်းကျင်က အသိအမှတ်ပြုသော နေရာလည်း ဖြစ်ပါသည်။ (ကမ္ဘာ ၁၈း၁၉) တွင် အာဗြဟံသည် စံပြ ခရစ်ယာန် အိမ်ထောင် ကို အစပြု ခဲ့ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ခင်ပွန်းသည်အား အိမ်ထောင်၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် စတင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါသည် (က ၁၈း၁၉၊ ဧ ၅း၂၃)။ ခရစ်တော်သည် အသင်းတော်၏ ဦးခေါင်း ဖြစ်တော်မူ သကဲ့သို့ ယောက်ျားသည် ဇနီးသည် အပေါ် အုပ်ထိန်းခွင့် ရှိပါသည်။ ဤ အစီအစဉ်သည် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်က ချမှတ်ပေးခဲ့သော အစီအစဉ် ဖြစ်၍ ဤကဲ့သို့ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သော အိမ်ထောင်များ၌ ငြိမ်သက်ခြင်း မရှိရုံမျှမက အိမ်ထောင် ပြိုကွဲသည် အထိပင် ဆိုးကျိုးများ သက်ရောက် နိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အုပ်စိုးမှုကို ၀န်ခံခြင်းဆိုရာ တွင် ဇနီးသည်သည် ခင်ပွန်း သည်အား ကျွန်တစ်ဦးကဲ့သို့ ၀န်ခံခြင်း မဟုတ်ဘဲ လုပ်ဖေါ် ဆောင်ဖက်အနေဖြင့် သဘောထားရန် ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန် အိမ်ထောင်တိုင်းသည် ချစ်ခြင်း မေတ္တာအပေါ် မူတည်၍ တည်ဆောက် ထားရမည်။ အိမ်ကို လက်ဖြင့် တည်ဆောက်ပြီး အိမ်ထောင်ကို မေတ္တာဖြင့် တည်ဆောက်ရမည် ဟု အလွန်ဆီလျော်သော စကားတစ်ခုကို သတိပြု မိပါသည်။ (၁ကော ၁၃) ပါအတိုင်း ကျင့် ကြံ၍ အသက်ရှင် လှုပ်ရှားသော အိမ်ထောင် များဖြစ်ရန် အရေးကြီး ပါသည်။ (၁ရာ ၁း၈၊ ကမ္ဘာ ၃၁း၎-၇၊ လု ၁၄း၂၆၊ ယောဘ ၁း၅)။
မြင့်မြတ် အောင်မြင်သော ခေါင်းဆောင် ကြီးများ၏ နောက်ကွယ်၌ အထောက်အကူ ပြုနေသော ဇနီး သို့မဟုတ် မိခင်ကြီးများ အစဉ် ရှိနေတတ် ပါသည်။ အိမ်ရှင်မ (ဇနီးသည်) ၏ ဦးစားပေး တာဝန်မှာ ခရစ်တော်ကို ချစ်ရန် ဖြစ် သည် (လု ၁၄း၂၆၊ မ ၂၂း၃၇)။ ဒုတိယ တာဝန်မှာ ခင်ပွန်း သည်ကို နာခံရန်ဖြစ်သည်(ဧ၅း၂၂)။ အာဗြဟံ၏ ဇနီး စာရာသည် မိမိ ခင်ပွန်းအား သခင်အနေဖြင့် နာခံပါသည် (၁ပေ ၃း၆)။ မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုတွင် လည်း သားကို သခင်၊ လင်ကို ဘုရား ဟူ၍ပင် တင်စားအလေးထားကြပါ သည်။
ဇနီးသည် တို့သည် (တိတု၂း၎-၅၊ ၁တိ ၂း၉-၁၀) ကဲ့သို့ ရှက်ကြောက်ခြင်း၊ ဣနြေ္ဒစောင့် ခြင်းအားဖြင့် လျောက်ပတ်သော အ၀တ်နှင့် လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်ကို ရိုသေ လေးမြတ်ခြင်းကို ၀န်ခံသော မိန်းမတို့ အဆင် သင့်သည့် အတိုင်း ကိုယ်ကို တန်ဆာဆင်ခြင်းငှာ အလိုတော် ရှိပါသည်။
ဤကျမ်းစာအတိုင်း အသက်ရှင် လိုက်လျှောက်သော အမျိုးသမီးများ ယခုခေတ်တွင် ရှားပါးနေသည်ကို အလွန်ဝမ်း နည်းစွာ တွေ့နေ ရပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီး မင်္ဂလာများကို ခံယူနိုင်ရန် ညွှန်းထားသော နှုတ်ကပတ် တော်များကို လိုက်နာ စေလိုပါသည် (သု ၃၁း၁၀-၂၈)။
ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြောက်ရိုသေသော သား သမီးများ
ဘုရားသခင်ပေးသော ပြည်တော် တွင် အသက်တာရှည်၍ ကောင်းစားလိုပါက သင်တို့သည် မိဘကို ရိုသေစွာပြုရမည် (ထွက် ၂၀း၁၂)။ ကျမ်းစာထဲတွင် ဣဇက်သည် စံပြ သားဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှမွေလသည် မိဘစကားကို နားထောင်သော သားတစ်ဦးအနေဖြင့် စံပြ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည်လည်း ကလေး ဘ၀တွင် မိဘစကားကို နာခံခြင်းဖြင့် နေထိုင် ခဲ့သည်(လု ၂း၅၁)။ ရှင်ပေါလုကလည်း ပြည် တော်၌ကောင်းစား၍ အသက်တာရှည်ရန် မိ ဘစကားကို ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် အညီ နားထောင်၍ ရိုသေရမည်ဟု လမ်းညွှန် ခဲ့ပါသည်(ဧ ၆း၁၃)။
သားသမီး တို့သည် ဘုရားသခင်၏ စကား၊ မိဘတို့၏ စကားကို နားထောင်၍ တူညီသော ထမ်းပိုးများကို ထမ်းလျက် ယုံကြည်သော မျိုးဆက်သစ်များကို ပေါက်ဖွားစေကာ ကမ္ဘာကြီးအား မင်္ဂလာရှိစေရန် ဘုရားသခင် အလိုတော် ရှိကြောင်း သိမှတ်လျက် ဆက်လက် ၍ ဘုရားပေး တာဝန်ကို ဦးလည် မသုန် ထမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်။
အထက်ပါ သုံးပွင့်ဆိုင် ဖခင်၊ မိခင်၊ သားသမီးတို့သည် ဘုရားစကားကို နားထောင်ကာ အိမ်ထောင်တွင် ဘုရား သခင်အား ၀တ် ပြုကိုးကွယ်၍ စကားတော်ကို နားထောင်ကြ မည်ဆိုပါက အောင်မြင် ခိုင်ခံ့ စည်းလုံးသော အိမ် ထောင်များ ဖြစ်ရုံမက အသင်းတော်၊ သာသနာနှင့် တိုင်းပြည်အတွက် အားကိုး အားထားရာ ကျောရိုးသဖွယ် ဖြစ်လာပြီး ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေသော အိမ်ထောင်များ ဖြစ်လာမည်မှာ ဧကန်မလွဲပင်ဖြစ်သည်။
မိမိအား ဘုရားသခင် ထားသော နေရာတွင် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို ဥဿုံ နာခံခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော် ကို ထင်ရှားစေနိုင်သော အိမ်ထောင်များ ဖြစ် ကြပါစေဟု ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးနေပါသည်။
← ဘုရားသခင် ကောင်းမြတ်သည်
ရှောလမုန်ဘုရင်၏ အသက်တာကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်း →
2 comments on “ဘုန်းတော်ထင်ရှားသော အိမ်ထောင်ဖြစ်ရန်”
Sein Thang on 25/07/2013 at 7:29 PM said:
အိမ်ထောင် မီးသားစုနဲ့ ဘုရားဘုန်းတော် များများတင်ဆက်ပေးပါရန်တောင်းဆို အပ်ပါသည်
jayjay on 29/10/2013 at 9:50 AM said:
အ၇မ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်…အခုလို နားလည်သဘောပေါက်စေသောကြောင့် အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..